हिमाल खबरपत्रिका | ‘नेपालबाट महिला क्रिकेट नै हराउन सक्छ’
‘नेपालबाट महिला क्रिकेट नै हराउन सक्छ’
हालै थाइल्याण्डमा सम्पन्न आईसीसी महिला टी–ट्वेन्टी विश्वकप एशिया छनोटमा उपविजेता बनेको नेपाली क्रिकेट टोलीकी कप्तान रुविना क्षेत्री बेलवासी भन्छिन्, “अनुभवको कमीले बाहिरियौं।”
थाइल्याण्डमा उपविजेतामै चित्त बुझाउनु पर्‍यो, है !
थाइल्याण्डमा हामीले अपेक्षित प्रदर्शन गर्न नसक्नुमा क्षमता भन्दा पनि अनुभवको कमी प्रमुख कारण हो । हामीले करीब दुई वर्षपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्यौं । यसबीच घरेलु खेलहरु पनि भएनन् । प्रतियोगितामा सहभागी हुनुभन्दा दुई महीनाअघिको तयारीले मात्र पुग्दैन ।
विश्वकपमा पुग्नका लागि के कमी भयो ?
निरन्तरको अभ्यास नै प्रमुख कुरा हो । देशमा बढीभन्दा बढी आन्तरिक प्रतियोगिता हुनुपर्छ, जुन हुनसकेको छैन । महिला क्रिकेटका मात्रै वर्षमा ४–५ वटा प्रतियोगिता हुनुपर्नेमा ‘प्रधानमन्त्री रनिङ शिल्ड’ बाहेक अर्को घरेलु प्रतियोगिता नै छैन । त्यस्तै विदेशी मैदानमा खेलको अवसरले खेलाडीको सीप र आत्मविश्वास बढाउँछ ।
थाइल्याण्डले केही त सिकायो होला नि !
एशियामा हाम्रो प्रतिस्पर्धी भनेको थाइल्याण्ड मात्र हो । थाइल्याण्ड बाहेक अरु सबै टोलीसँगको खेलमा जित नै हात पारेका हौं । तर, महिला क्रिकेटलाई थाइल्याण्डले दिएको महत्व र उनीहरुले गरेको लगानीको तुलनामा हामी धेरै पछाडि छौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिनुअघि पर्याप्त तयारी गरिनुपर्छ भन्ने सिकाइ रह्यो ।
महिला क्रिकेटको विकासका लागि तत्कालै चाहिएको के हो ?
पहिलो कुरा त महिला खेलाडीले क्रिकेट खेलेर जीवन निर्वाह गर्नै मुश्किल छ । खेलाडीले गुजारा गर्ने मात्र होइन, राम्रो खेल्न सकेमा प्रतिष्ठा, सुविधा सबै पाउँछु भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसैले महिला खेलाडीलाई कम्तीमा पनि मासिक तलब दिइनुपर्ने कुरा उठाइरहेका छौं । अर्को कुरा, खेलाडी उत्पादनका लागि स्थानीयस्तरमा नै महिला क्रिकेट प्रतियोगिताहरु आयोजना हुनुपर्दछ ।
नेपालमा महिला क्रिकेटको सम्भावना कस्तो छ ?
खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीति नै देखिंदैन । सरकारले खेलाडीहरु देशका लागि खेलिरहेका छन् भन्ने सोचेर त्यही अनुसार लगानी गर्नुपर्ने हो, जुन हुनसकेको छैन । सम्भावना नदेखेरै नयाँ खेलाडी आउन सकेका छैनन् । यस्तै अवस्था कायम रह्यो भने अबको दुई वर्षपछि नेपालबाट महिला क्रिकेट नै हराउन सक्ने जोखिम छ ।